Shil sababay dhimashada dad badan oo ka dhacay Nugaal Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Shil sababay dhimashada dad badan oo ka dhacay Nugaal Ku dhawaad 10 ruux ayaa ku geeriyootay Shil gaari oo ka dhacay deegaan hoostaga gobolka Nugaal kadib markii uu shil galay gaari ay la socdeen dadkaasi.
Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ayaa sheegaya in maanta gaari Xamuul ah uu ku rogmaday Tuulo lagu magacaabo Xaaji qeyr oo hoostagta deegaanka Dan-Goronyo oo hoostaga gobolka Nugaal.
Gaariga oo ka yimid magaalada Boosaaso kuna sii jeeday magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen 6 ruux 7 kalana ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo ahaa rakaabkii gaariga saarnaa.
C/qaadir Saciid C/raxmaan oo ah Duqa magaalada Garoowe ayaa u sheegay Warlalis in dadka ku dhaawacmay shilka gaari ay gurmad u fidiyeen hadana ay geeyeen Isbital ku yaalla magaalada oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo.
Shilkaani ayaa waxa uu qeyb ka yahay shilal gaari oo horay uga dhacay deegaano hoostaga Nugaal, iyadoo Maamulka Puntland uu goor sii horaysay ka digay in wadayaasha gaadiidka ay si xowli ah u wadaaan gaadiidka.